YouTube प्याकेज डील खरीद गर्नुहोस् - YTpals
भिडियो प्रमोशन प्याकेज डीलहरू
च्यानल र भिडियो अप्टिमाइजेसन प्याकेज डीलहरू
1000 दृश्य प्याकेज
1000 दृश्य $ 20
50 मनपर्यो $ 7
१०० सेयरहरू $ 10
10 टिप्पणिहरु $ 20
अधिकतम 1 भिडियोमा सेवा पुर्‍याइन्छ।
2000 दृश्य प्याकेज
2000 दृश्य $ 30
100 मनपर्यो $ 13
२ Sha० सेयरहरू $ 20
20 टिप्पणिहरु $ 35
अधिकतम 1-2 भिडियो बीचमा विभाजन गर्न सकिन्छ।
3000 दृश्य प्याकेज
3000 दृश्य $ 40
200 मनपर्यो $ 20
२ Sha० सेयरहरू $ 30
30 टिप्पणिहरु $ 50
अधिकतम 1-3 भिडियो बीचमा विभाजन गर्न सकिन्छ।
4000 दृश्य प्याकेज
4000 दृश्य $ 50
300 मनपर्यो $ 25
२ Sha० सेयरहरू $ 50
40 टिप्पणिहरु $ 65
अधिकतम 1-4 भिडियो बीचमा विभाजन गर्न सकिन्छ।
5000 दृश्य प्याकेज
5000 दृश्य $ 60
400 मनपर्यो $ 35
२ Sha० सेयरहरू $ 80
50 टिप्पणिहरु $ 80
अधिकतम 1-5 भिडियो बीचमा विभाजन गर्न सकिन्छ।
10000 दृश्य प्याकेज
10000 दृश्य $ 100
1200 मनपर्यो $ 70
२ Sha० सेयरहरू $ 130
100 टिप्पणिहरु $ 140
अधिकतम 1-10 भिडियो बीचमा विभाजन गर्न सकिन्छ।
च्यानल अनुकूलन प्याकेज
१० च्यानल मूल्यांकन $ 120
१ च्यानल ब्यानर डिजाइन $ 60
१ च्यानल प्रोफाइल थम्बनेल डिजाइन $ 25
हामी यो सेवा १ च्यानलमा पुर्‍याउँछौं।
Videos भिडियो अप्टिमाइजेसन प्याकेज
Video भिडियो मूल्यांकन $ 150
Video भिडियो थम्बनेल डिजाइन $ 130
हामी यी सेवाहरू videos भिडियोहरूमा डेलिभर गर्दछौं।
प्याकेज डिल खरीद गर्दा के फाइदा हुन्छ?
प्याकेज डिलहरू सबै सेवाहरू संयोजन गर्न डिजाईन गरिएको हो तपाईले इष्टतम नतिजा र छूट मूल्यमा सँगै खरीद गर्नु पर्छ।
उदाहरणको लागि, केवल 5,000,००० दृश्यहरू खरीद गर्नुको सट्टा तपाई उत्कृष्ट रैंकिंग प्रदर्शन र प्राकृतिक देखा पर्ने परिणामहरू पाउनुहुनेछ जब तपाईं 400०० लाइक, २००० सेयर र comments० कमेन्टहरू पनि खरीद गर्नुहुन्छ।
हामी तपाईंलाई इष्टतम परिणाम दिन सही सेवाहरू मिलाउँछौं।
सबैभन्दा लोकप्रिय प्याकेज डिल के हो?
सब भन्दा लोकप्रिय प्याकेज डील "5000 दृश्य प्याकेज" हो। यो अधिकतम १ देखि videos भिडियोमा फैलिन सकिन्छ।
जहाँसम्म, प्याकेज हामी प्रत्येकलाई खरीद गर्न सिफारिस गर्छौं "च्यानल र भिडियो अप्टिमाइजेसन प्याकेज डिलहरू" मा र यो "च्यानल अनुकूलन प्याकेज" हो।
यदि तपाइँ यूट्यूबमा तपाइँको सफलताको बारे मा गम्भीर हुनुहुन्छ भने, तपाइँ तपाइँको च्यानल मूल्या let्कन दिई एक विशाल छलांग अगाडि बढाउनुहुनेछ, तपाइँलाई के परिवर्तन गर्नु पर्छ भनेर बताउनुहुन्छ र तपाइँको च्यानललाई "बिगटाइम YouTuber" उपस्थिति दिन प्रोफेशनल ग्राफिक्स प्रदान गर्नुहुन्छ।
के तपाईं अन्य प्याकेज डिल प्रस्ताव गर्नुहुन्छ?
हामी अनुकूलन प्याकेज डिलहरू तयार गर्न सक्छौं। यदि तपाईं अन्य सेवाहरू मिक्स गर्न र मिलाउन चाहनुहुन्छ, वा केहि सेवाहरूको मात्रा बढाउन चाहनुहुन्छ भने, हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् र हामीलाई सहि सेवाहरू र प्रत्येक सेवाको मात्रा बताउनुहोस् जुन तपाईं मिलाउन चाहानुहुन्छ। हामी तपाईंलाई अनुकूलन प्रस्ताव प्रदान गर्नेछौं।